Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyada S.Ogadenia Ee S.africa Oo Qaybisay Raashin Zako Ah.
Jaaliyada S.Ogadenia Ee S.africa Oo Qaybisay Raashin Zako Ah.
Posted by Dulmane	/ July 3, 2016
Maanta oo Axad ah taariikhduna ay ku beegantahay 3/7/16 Waxaa xafiiska Jaaliyada Ogadenia ee gobolka Eastern Cape ee wadanka S.africa lagu soo gaba gabeeyay howlgal lagu qaybinayay raashin Zakaatul Fidri ah oo looqaybiyay qaar kamid ah muslimiinta kudhaqan Gobolkaas ee danyarta ah.
Raashinkan Zakaatul-fidriga ah ee danyarta lagaga farxiyay waxaa maamulkeeda lahaa Gudiga Jaaliyada Ogadenia ee wadanka K/africa gaar ahaan faraca Easern Cape, hadaba Jaaliyada ayaa raashinkan Zakaatul-Fidriga ah gaadhsiisay in kabadan 30 qays oo muslimiinta magaalada ku dhaqan ah iyagoo ka faa’iidaysanayay 10ka dambe ee bisha barakaysan ee Ramadaan.
Raashinka maanta danyarta lagaga farxiyay waxaa labaxay Hay’ada maxaliga ah ee lagu magacaabo Zansaf South
Africa National ZAKAH fund. Waxayna hay’adu bixinta iyo maamulka raashinkan u wakiilatay Jaaliyada Ogadenia ee South Africa. Hay’ada oo ah hay’ad Maxali ah (local NGO) ayaa dhamaan Gobolada wadanka kawada howlgal noocan oo kale ah oo lagaga farxinayo dadka masaakiinta ah waxayna hay’adu barnaamijkan uwakiilatay Jaaliyada Ogadenia ee K/afirika.
Hay’ada Zanzaf oo aad ula dhacday qaabka quruxda badan ee Jaaliyada Ogadenia umaamushay howshii loo Igmaday ayaa umahadcelisay maamulka Jaaliyada Ogadenia iyo guud ahaan jaaliyada Ogadenia ee S.africa waxayna balan qaadeen in ay bixin doonaan raashin kaloo noocan oo kale ah. Sidoo kale maamulka Jaaliyada Ogadenia ayaa umahad celiyay Hay’ada Zansaf waxayna ku amaaneen sida qiimaha badan ee danyarta ay u caawinayaan.
Isku soo wada duub oo waxaa maanta xafiiska Jaaliyada ee Eastern Cape lagaga farxiyay dad danyar ah waxayna dadku aad ugu mahadceliyeen maamulka Jaaliyada Ogadenia iyo waliba hay’ada kafarxisay.